Lavasoft: waa maxay iyo maxay ka kooban tahay | Madasha Mobile -ka
Lavasoft: waa maxay iyo maxay ka kooban tahay
Daniel Terrasa | 17/09/2021 09:00 | Barnaamijyada
In laga hadlo Lavasoft, waxa ay tahay iyo waxa aan u adeegsan doonno, waxaa lagama maarmaan ah in marka hore la caddeeyo waxa ay tahay inaan u tixraacno labada shirkadood iyo alaabteeda magac kale leh: Adaware. Waana tan iyo 2018 kani waa magaca cusub ee shirkadda horumarinta software -ka caanka ah ee ku takhasustay ogaanshaha spyware iyo malware.
Taariikhda Lavasoft waxay ka bilaabmaysaa Jarmalka 1999 -kii markii la bilaabay Adaware, oo ka mid ah antivirus -kii ugu horreeyay ee suuqa soo gala. Sannado ka dib, 2011, Lavasoft waxaa iibsaday sanduuq hantiyeed oo gaar loo leeyahay Sanduuqa Solaria, u soo guuritaanka degitaanka magaalada Göteborg ee dalka Iswiidan.
Hadda xarunta shirkadda (oo hore loogu yiqiin Adaware, magaca badeecadeeda calanka) waxay ku taal Montreal, Kanada.
Shirkadu waxay ku bixisaa badeecadeeda weyn ee Adaware saddex nooc oo kala duwan: mid bilaash ah iyo labo lacag ah (Pro iyo Wadar). Laakiin waxay kaloo suuq galisaa xalal iyo adeegyo kale oo badan sida Adaware Ad Block, Adaware Web Companion, Lavasoft Digital Lock, Lavasoft File Shredder ama Lavasoft Privacy Tool, iyo kuwo kale.
Si kastaba ha noqotee, markaan isweydiinno su'aasha ah "Waa maxay Lavasoft?" waxaan ula jeednaa Antivirus antivirus. Tani waa mid dhab ah dilaaga awood u leh ogaanshaha iyo ka saarida dhammaan noocyada furin, spyware iyo adware. Caymis ka dhan ah fayrasyada kombiyuutarka, Trojans, bots, dulin iyo barnaamijyo kale oo waxyeello u leh kombiyuutarradayada.
1 Spyware iyo furin, khatar ku ah kombiyuutarkaaga
2.1 Soo dejiso iyo rakibidda
2.2 Sidee u shaqeysaa?
2.3 Xayeysiiska Daawo Live!
3 Noocyada lacag bixinta ee Lavasoft Adaware ma u qalmaan?
3.1 Nooca Pro
3.2 Wadarta Guud
Spyware iyo furin, khatar ku ah kombiyuutarkaaga
Lavasoft, waa maxay? Iskusoo wada duuboo, caymis kombiyuutarradayada ka dhan ah furin iyo spyware
Malaayiin qof ayaa internet -ka ka adeegsada aaladooda dhammaan dacallada adduunka. Dhammaantood waxay la kulmaan khataraha ka iman kara barnaamijyada xaasidnimada ah (malware) iyo basaasnimo. Lavasoft, oo ah mashruuc ku wajahan amniga internetka tan iyo markii la aasaasay, ayaa sanadihii la soo dhaafay si kaamil ah u soo saarayay alaabteeda si meesha looga saaro khatarahaas loona yareeyo waxyeeladooda.
Laakiin si looga adkaado cadowga, waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa in si fiican loo yaqaanno. Markaa aan xusuusanno waxay yihiin iyo waxay nagu samayn karaan.
Qofna kama badbaado in lagu weeraro a barnaamijka basaasnimadaXitaa kumbuyuutar khaas ah oo aan u isticmaalno oo keliya fudud oo, mabda 'ahaan, hawlo aan xiiso lahayn.
Barnaamijyada noocaan ah waxay isku rakibaan kombiyuutar waxayna socodsiiyaan mar kasta oo kombiyuutarku bilowdo. Marka sidaas la yeelo, waxay isticmaashaa xusuusta CPU iyo RAM labadaba, sidaasna waxay ku yareysaa xasilloonida kombiyuutarka. Intaa waxaa dheer, spyware waligeed ma nasto, si joogto ah ula socota adeegsigayaga internetka, badiyaa leh ujeedooyinka xayeysiinta.
Software -ka noocan ah wuxuu si joogto ah ula socdaa dhammaan booqashooyinkayaga bogagga Internetka wuxuuna abuuraa keydka macluumaadka dhadhanka iyo doorbidyada si uu noogu soo diro xayeysiis la beegsaday. Ma ahaan doonto wax xun gaar ahaan haddii aysan ahayn xaqiiqda ah, in howshan oo dhan, spyware wuxuu cunaa ilaha kombiyuutarkeena waxayna ka dhigtaa mid ku shaqaysa xamaasad ka yar intii ay ahayd.
Ereygan waa soo gaabinta muujinta Barnaamijyada xaasidnimada, taas oo af -ingiriisi macnaheedu yahay "barnaamij xaasidnimo ah." Barnaamijyadii ugu horreeyay ee nuucaan ah waxay dhasheen ujeeddadu inay noqoto kaftan badan oo aan waxba galabsan oo ay ku kacaan saynisyahanno kombiyuutar oo xirfad leh: qaar badan oo iyaga ka mid ah waxay ku dhuunteen waxa loogu yeero ujeeddooyinka wanaagsan sida muujiyaan ceebaha amniga ee bogagga shabakadda iyo nidaamyada hawlgalka.
Laakiin khayaanada ayaa si dhaqso ah ugu leexatay hawlo sharci darro ah oo mugdi ah ama toos ah. Noocyada khayaanada oo khatar weyn u ah kombiyuutarradeenna way badan yihiin waana kala duwan yihiin (fayrasyada, gooryaanka, Trojans ...), hase yeeshee waxaa jira mid gaar ah oo Lavasoft ahmiyad gaar ah siiyay xallinta: adware.
Xayeysiis (Software -ka xayeysiinta ama adware) waa barnaamij soo bandhiga xayeysiis marka la furayo bogga internetka iyada oo loo marayo garaafyada, boodhadhka ama daaqadaha sabaynaysa: Xayeysiis dhibsanaya oo soo ifbaxaya markaan isku deyeynno inaan barnaamij rakibno sidoo kale waa adware.
Lavasoft Adaware: waxay tahay iyo waxay ka kooban tahay
Barnaamijka Lavasoft Ad-Aware waa codsi software anti-spyware loogu talagalay in lagula dagaallamo dhammaan noocyada spyware iyo furin. Waxaan ka hadleynaa badeecad leh wax -qabad ka badan inta la xaqiijiyay. Caddaynta wanaagsan ee tan ayaa ah in ay adeegsadaan ku dhawaad ​​300 milyan oo isticmaale oo adduunka ah. Tani waxay Adaware ka dhigtay mid ka mid ah codsiyada ilaalinta ugu caansan ee kombiyuutarada la jaan qaada nidaamyada Microsoft Windows.
Soo dejiso iyo rakibidda
La nuqul bilaash ah Barnaamijka Adaware waxaa laga soo dejisan karaa faylkaaga website-ka rasmiga ah (download link: Adaware).
Si aan u bilowno habka rakibidda, waxaan socodsiin doonaa faylka rakibayaasha Adaware annaga oo raacaya tallaabooyinkan fudud:
Waxaan doorannaa luqad oo guji badhanka "In la aqbalo" oo ka muuqda shaashadda soo -dhaweynta.
Waxaan calaamadeyneynaa sanduuqa "Waan ogolahay" shuruudaha heshiiska liisanka oo guji "Xiga"
Markaa waa inaan kaliya "gujin" badhanka. "Ku rakib", sidaasna lagu bilaabo hawsha, oo qaadan karta dhowr daqiiqo.
Marka rakibidda la dhammeeyo, waa inaad Dib u bilaw kumbuyuutarkaaga.
Haddii rakibida lagu guuleystay, Adaware si otomaatig ah ayuu u bilaaban doonaa mar kasta oo aan shidno kombiyuutarkeena. Annaga oo aan wax tallaabo ah qaadin, barnaamijku wuxuu ku xirnaan doonaa internetka si uu isu cusboonaysiiyo oo u soo dejiyo qeexitaannada khayaanada cusub. Macluumaadkan cusub ayaa lagu dari doonaa barnaamijka mar kasta oo aan dib u bilowno PC -ga. Taasi waa, mar kasta oo aan dib u bilowno waxaan wanaajin doonaa waxtarka antivirus -kan.
Si loo furo barnaamijka gacanta waa inaad raacdaa waddada soo socota:
Bilow> Barnaamijyada oo dhan> LavaSoft> Ad-Aware
Ama guji astaanta toosan ee ka muuqata shaashaddayada haddii rakibidda lagu guulaystay. Si kastaba ha ahaatee, ama ama aan lahayn amarradayada, Adaware waxay sii wadi doontaa inay baarto oo ogaato kuwa soo geli kara faylkayaga, taasoo meesha ka saareysa dhammaan walxaha laga shakiyo ama walxaha halista ku ah kombiyuutarkeena.
Haddii aan rabno inaan gacanta ku isticmaalno Adaware waa inaan gujineynaa astaanta «Falanqaynta Nidaamka» lagu soo bandhigay shaashadda guriga ee barnaamijka. Baadhitaanka, oo qaadan kara dhowr daqiiqo, ayaa muujinaya natiijada tirada faylasha la baaray iyo inta ka mid ah ee loo aqoonsaday inay yihiin furin ama basaas. Kuwaan si otomaatig ah ayaa looga saaraa.
Xayeysiiska Daawo Live!
Haddii aanan haysan waqti aan si joogto ah ugu nadiifiyo qalabkayaga, wax dhibaato ah ma jirto. Hore ayaan u sheegnay in Adaware ay wax walba daryeesho iyagoon na weydiin. Markaad kombiyuutarkaaga bilowdo, barnaamijka Ad-Aware ee deggan Xayeysiiska Daawo Live! Hadafkeedu: in la dabagalo oo la tirtiro wax kasta oo xaasidnimo ah oo isku daya inuu isku rakibo kombiyuutarkeena oggolaansho la'aan.
In kasta oo ay tahay aalad aad waxtar u leh, waxaa laga yaabaa in inta uu kombiyuutarkeenu shaqeynayo laga yaabo in uu si tartiib tartiib ah u shaqeeyo. Taasi waxay noqon kartaa buuq haddii aan daawaneyno qaar ka mid ah waxyaabaha qulqulaya ama aan ka shaqeyneyno hawl kale. Nasiib wanaag, waxaan haysanaa ikhtiyaarka ah gab Ad-Watch!, xataa si ku meel gaar ah. Hawlgalkan waxaa lagu fulin karaa dhowr ilbiriqsi adigoo gujinaya sumadeeda badhanka midig ee kombiyuutarka.
Muhiim: nooca bilaashka ah ee Lavasoft Adaware wuxuu ka shaqeeyaa shaqooyin aad u gaar ah (ogaanshaha iyo ka saarista spyware iyo adware), oo leh baaxad xaddidan. Sababtaas awgeed, looma tixgelin karo antivirus dhammaystiran. Taasi waa waxa noocyada lacag bixinta loogu talagalay.
Noocyada lacag bixinta ee Lavasoft Adaware ma u qalmaan?
In kasta oo nooca xorta ah ee Lavasoft Adaware uu bixiyo faa'iidooyin aan la dafiri karin, haddana waxaa suurtogal ah in uu u gaabiyo sidii aalad ku habboon amniga iyo nadaafadda kombiyuutarkeenna. Ikhtiyaaraadka lacag -bixinta ayaa sida iska cad aad u dhammaystiran. Go'aaminta haddii ay mudan yihiin bixinta iyaga waxay ku xirnaan doontaa baahida iyo duruufaha isticmaale kasta.
Sida magaceeda ka muuqata, waa loogu talagalay adeegsadayaasha xirfadda leh. Ikhtiyaar u ah adeegsadayaasha horumarsan ee aadka u baahan. Waxaa ka mid ah faa'iidooyinka kale, waxay na siisaa nabadgelyo soo dejin, waxay xannibtaa marin u helka degellada halista ah iyo hanjabaadaha khadka tooska ah, waxayna ku ilaalineysaa akoonnada emaylkayaga shaandheeyeyaal xoog leh oo ka hortagga spam. Heerka ilaalinta hawlgallada bangiyada internetka ayaa sidoo kale ah mid aad u xiiso badan, mid ka mid ah ujeeddooyinka aadka loo danaynayo ee haakarisku.
Intaa waxaa dheer, Adaware Pro ayaa bixisa taageero farsamo online joogto u ah adeegsadeyaasheeda. Waxay kaloo bixisaa ikhtiyaarro xiiso leh sida xakameynta waalidka (aad bay ugu habboon tahay haddii kombiyuutarka ay adeegsadaan carruurta aan qaangaarin) ama nadiifinta faylasha ee kombiyuutarkeena.
Lavasoft Adaware Pro waxaa lagu qiimeeyaa € 36.
Heerka ugu sarreeya ee amniga. Wax kasta oo nooca Pro uu bixiyo, Lavasoft Adaware Total wuxuu ku darayaa dhammaan noocyada kala duwan ee carqaladaha amniga dhinac kasta oo u nugul inay weeraraan wakiilada dibadda. Markaa, wuxuu ku daraa antivirus cusub oo wax ku ool ah, antispyware, firewall iyo antiphishing systems, iyo waxyaabo kale oo badan.
Waxa kale oo xusid mudan Qalabka Qarsoodiga, sababtoo ah fikradani waxay si dhow ula xiriirtaa badbaadada. Nooca Wadarta ayaa mas'uul ka ah isku -darka labada fikradood iyo u beddelidda kooxdeena xoogag aan la taaban karin.
Qiimaha Lavasoft Adaware Total waa € 48.
Shuruudaha ugu yar ee lagu rakibo mid kasta oo ka mid ah saddexda nooc ee Adaware (Bilaash, Pro iyo Wadarta waa kuwan soo socda:
Windows 7, 8, 8.1 iyo 10 nidaamka hawlgalka.
Qalabka rakibaadda Microsoft Windows 4.5 ama ka sareeya.
1,8 GB oo ah meel diskiga adag laga heli karo (oo lagu daray ugu yaraan 800 MB ee diskka nidaamka).
1,6 MHz processor.
1 GB oo RAM ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Barnaamijyada » Lavasoft: waa maxay iyo maxay ka kooban tahay
Sida loo bixiyo Paypal on Amazon